A320 Isbeddelka Qoyska
Su'aal A320 Isbeddelka Qoyska
Bilood 8 2 todobaad ka hor #1264 by 3201907
Waxaan u isticmaali jiray qoyskii A320 loogu talagalay FSX sidii hore, qiyaas ahaan, labo sano oo aan lahayn arrin.
Waxaan dhawaan ku casuumay P3D v4.3 iyo inta ay socdaan diyaaradaha, "qalabka dabka" waxba kama soo celin doono. Marka, ma bilaabi karo makiinadaha.
Macluumaad kasta oo ku saabsan tan ama caawimaad?
Bilood 8 2 todobaad ka hor - Bilood 8 2 todobaad ka hor #1265 by rikoooo
Si kastaba ha ahaatee, waxaan imtixaan sameeyey oo wax walba si fiican u shaqeynayay, si kastaba ha ahaatee, waxaan isticmaalaa furaha dabka ee xNUMXD halkii laga heli lahaa qoob-ka-shaqeeynta farsamada, isku day sidii aniga oo kale, waa in la xalliyaa. CTRL + E ayaa sidoo kale sameyn doona trick
Last edit: Bilo 8 2 usbuucyo by by rikoooo.
Bilood 8 2 todobaad ka hor #1266 by 3201907
Waxaan isku dayi doonaa caawa ama berri. Marnaba kuma fikirin isticmaalka guddi 2D; Waxaan ilaaway haha
Waxaan "khariidadda" ku soo rogay wicitaanka adigoo isticmaalaya key 'key' 'I' furaha 'keyboard' loogu talagalay Iskuduwaha Mucaaradka Master (On), laakiin ma jiro ikhtiyaari si loo muujiyo fure u furan. Si kastaba ha noqotee, waan daryeeli karaa haddii ay gasho "off".
Waxyaabaha ugu dambeeyey, iyo quseynta qoyska A320 laakiin ma ahan wax ku saabsan wareegga: FSX kamaradaha ayaa lagu dhejiyay boorka iyo fareebka faraha. Kaliya sawirada kamaradaha oo kaliya ayaa hadda u ogolaanaya P3D v4.3 Mar labaad, waxkasta oo aan shaqayn karin, tusaale ahaan FSX waxaan awood u lahaa inay soo celiyaan kamaradaha garabka (dibadda) labadaba zoom mouse iyo sidoo kale Control / Shift / Enter keys . Wax kasta oo ka soo horjeeda tan? Fiiri sawirka ku lifaaqan. In FSX waxaan awooday in aan isticmaalo muraayadda cirifka si ay u fogeyso ka dibna isticmaasho Koontaroolka / Dareemaha / Galitaanka Furaha si aad u dhaqaajiso kamaradda hoosta. Dabcan, waxaan samaystay aragtida kamarad gaar ah, ka dibna waxay ilaalinaysay duulimaadka si aysan kamaraduhu dib u bilaabin.
Waad ku mahadsantihiin caawimada leh furaha!